ဖဖေျောဝါရီ ၃, ၂၀၁၈ - ၁၁:၀၀ ညနေ
ဇနျနဝါရီ ၂၉, ၂၀၁၈ - ၇:၁၉ ညနေ
အောကျတိုဘာ ၉, ၂၀၁၇ - ၉:၂၆ ညနေ
ဘ၀ကြင်ဖော်ကို လူငယ်လူရွယ်တိုင်း (သို့မဟုတ်) မိဘများမှ မည်သူကရွေးချယ်ရမည်နည်း? ဆို သည့် ကိစ္စရပ်ကို ဟဇရတ် အာယာ သွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ မကာရေမ်မိုရှိရာဇီး ရေးသား သီးကုံး ထား သည့် ( မွရ်ှကေလာသ်သေ ဂျင်စီ ဝါ ဂျဝါနန် )) စာအုပ်မှ အဗ်နာ ချစ်ပရိတ်သတ် များ အတွက် ကောက်နုတ် တင်ပြအပ်ပါတယ်။
အောကျတိုဘာ ၉, ၂၀၁၇ - ၉:၂၅ ညနေ
တင်းကြပ်သော မိဘများဆို သည့် ကိစ္စရပ်ကို ဟဇရတ် အာယာ သွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ မကာရေမ်မိုရှိရာဇီး ရေးသား သီးကုံး ထား သည့် ( မွရ်ှကေလာသ်သေ ဂျင်စီ ဝါ ဂျဝါနန် )) စာအုပ်မှ အဗ်နာ ချစ်ပရိတ်သတ် များ အတွက် ကောက်နုတ် တင်ပြအပ်ပါတယ်။
အိမ်ထောင်သည်ဘ၀ အတွက် အဟန့်အတားကြီး (၇) ခု
အောကျတိုဘာ ၉, ၂၀၁၇ - ၅:၅၈ ညနေ
အိမ်ထောင်သည်ဘ၀ အတွက် အဟန့်အတားကြီး (၇) ခုဆို သည့် ကိစ္စရပ်ကို ဟဇရတ် အာယာ သွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ မကာရေမ်မိုရှိရာဇီး ရေးသား သီးကုံး ထား သည့် ( မွရ်ှကေလာသ်သေ ဂျင်စီ ဝါ ဂျဝါနန် )) စာအုပ်မှ အဗ်နာ ချစ်ပရိတ်သတ် များ အတွက် ကောက်နုတ် တင်ပြအပ်ပါတယ်။
အောကျတိုဘာ ၈, ၂၀၁၇ - ၃:၄၉ ညနေ
အောကျတိုဘာ ၇, ၂၀၁၇ - ၇:၂၄ ညနေ
အိမ်ထောင်ဖက်ရွေးရာ၌ အခက်အခဲပြဿနာများ ဆိုသည့် ကိစ္စရပ်ကို ဟဇရတ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ မကာရေမ်မိုရှိရာဇီးရေးသားသီးကုံးထားသည့် ( မွရ်ှကေလာသ်သေ ဂျင်စီ ဝါ ဂျဝါနန် )) စာအုပ်မှ အဗ်နာ ချစ်ပရိတ်သတ် များ အတွက် ကောက်နုတ် တင်ပြအပ်ပါတယ်။
စကျတငျဘာ ၄, ၂၀၁၇ - ၈:၅၁ ညနေ
မဟော်ရမ် နီးကပ်လာပြီး ဖြစ်သဖြင့် အေမာမ် ဟိုစိန် (အ.ဂျ) ၏ ရည်ရွယ်ချက်များကို သိရှိရန် အလွန်အရေးကြီးသည့် အတွက် ဟိုစိုင်း(န) နီ (အ.စ) တော်လှန်ရေး ၏ ရည်ရွယ် ချက်များ ဆိုသည့် မြန်မာ ဘာသာပြန်စာအုပ်ကို သက်ဆိုင်သူထံ မှ ခွင့်တောင်းပြီး တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
ဩဂုတျ ၁၈, ၂၀၁၇ - ၉:၅၄ ညနေ
အေမာမ် ဟိုစိုင်း (အ.စ) ကရ်ဗလာ သွားသည့် ရည်ရွယ်ချက်များ မှ ၅ ခု
ဩဂုတျ ၉, ၂၀၁၇ - ၁၁:၀၉ ညနေ
အေမာမ် ဟိုစိုင်း (အ.စ) ကရ်ဗလာ သွားသည့် ရည်ရွယ်ချက်များ မှ ၅ ခု အား အဗ်နာ ချစ်ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ဤ ရည်ရွယ်ချက်များသည် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ မကာရေမ်မို ရှီရာဇီး ၏ ဟောကြားချက်များမှ ဖြစ်ပါတယ်။
ဇူလိုငျ ၈, ၂၀၁၇ - ၁၂:၁၆ ညနေ
ဘာသာရေး အမေး အဖြေ ဆိုင်ရာ မှတ်စုတိုလေးများ
ဇှနျ ၇, ၂၀၁၇ - ၉:၁၈ ညနေ
မေ ၈, ၂၀၁၇ - ၉:၁၂ ညနေ
မေ ၅, ၂၀၁၇ - ၁၁:၅၆ ညနေ
ဧပွီ ၃၀, ၂၀၁၇ - ၁၁:၃၄ ညနေ
ဘာကြောင့်လဲ ခင်ဗျား …???
ဇနျနဝါရီ ၈, ၂၀၁၇ - ၁၀:၂၉ ညနေ
ဘာကြောင့်လဲ ခင်ဗျား …??? ဆိုသည့် မိန့်ခွန်းလေး တစ်ခု ကို အဗ်နာ ချစ်ပရိတ် သတ်ကြီး အတွက် တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။
မှတ်သား စရာ အတို အထွာလေးများ
တစ်ဖက်သတ် အဆုံးအဖြတ် မပြုရ ….
နိုဝငျဘာ ၂၂, ၂၀၁၆ - ၂:၅၆ ညနေ
မှတ်သား စရာ အတို အထွာလေးများ အဖြစ် ((တစ်ဖက်သတ် အဆုံးအဖြတ် မပြုရ ….)) ဆိုသည့် ခေါင်းစဉ် လေး ကိုတင်ပြလိုက်ပါတယ်။
ပါးစပ် ကြောင့်ဖြစ်သည့် ဂိုနာများ
နိုဝငျဘာ ၂၂, ၂၀၁၆ - ၂:၄၉ ညနေ
မှတ်သား စရာ အတို အထွာလေးများ အဖြစ် အထက်ပါ ဓာတ်ပုံမှ ပါးစပ် ကြောင့်ဖြစ်သည့် ဂိုနာများကို ပုံဖော်ပြထားပါတယ်။
ကျမ်းငယ်အမည် - လူငယ်လူရွယ်တို့၏ ကာမရာဂ ဆိုင်ရာ ပြဿနာများ
စကျတငျဘာ ၂၉, ၂၀၁၆ - ၁၁:၅၆ ညနေ
မိခင်နှင့်ဖခင်သည် မေ့လျော့ခြင်း သတိမမူကြခြင်းဆိုသည့် အိပ်စက် ခြင်းဖြင့် အိပ်စက်နေကြလေသည်။ လူငယ်လူရွယ်များသည်လည်းပဲ အဖြစ် အပျက်များနှင့် ရင်ဆိုင်ရမည်မှာ ဧကန်မလွဲပင်တည်း။ ၄င်းလူငယ်လူရွယ် များသည်လည်း ဂရုမပြုမှု၊ အလေးမထားမှု၊ ပေါ့လျော့မှု တို့တွင် နစ်မွန်း နေလေ သည်။